musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiFrench Vanotamba Thomas Lemar Childhood Story Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeChishanu yeBhola inonyanya kuzivikanwa neNickname; 'Mr Versatile'. Our Thomas Lemar Childhood Story Nhoroondo ye Untold Biography chokwadi inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake. Iye zvino kunze, Thomas Lemar ndechimwe chezvinhu zvinopisa zvikuru muwindo rekutsvaga kwechando ra 2017. Zvino, regai Tanga.
Thomas Lemar Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga
Thomas Lemar akaberekwa musi we 12th November we1995 muchiteshi cheCarribean Baie-Mahault, Guadeloupe, iyo inharaunda yeFrance. Guadeloupe is Island inonzi inozivikanwa nekuunza matarenda ematema muFrance. Mazita anozivikanwa akafanana Thierry Henry uye Alexandre Lacazette vose vane nhaka yavo kubva kuChiwi. Vabereki vavo vose vakatamira kuFrance vachibva kune chitsuwa chakave chakafanana nehove yeFrance West Indies.
Thomas Lemar Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Ukama Hupenyu
Penguva yekunyora, Thomas Lemar akaratidza hukama hwehukama hwake kuti ave asina kuroorwa. Izvi zvinoreva kuti hakuna hukama hwechokwadi kana Ex-vasikana kana vekare. Haana vana vanawo.
Thomas Lemar Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Chimiro cheMutambo
Lemar mutevedzeri unoenderana-siyana anokwanisa kutamba pamapapiro ose pamwe chete uye nepakati nepakati uye pasina. Anonyanya kusiyiwa netsoka, asi anokwanisawo nerutsoka rwake rworudyi. Iye anozivikanwa nokuda kwehuchenjeri hwake hwakakosha, unyanzvi hwekupfuura uye kusununguka kusununguka. Akataura kuti anofarira kushamwaridzana nevatambi veboka, pane kutora vadziviriri: "Ndiri kuedza kudzivisa kubata uye kuisa pfungwa dzangu pakupfuura uye kufambisa zvakanyanya."Anowanzoedza kutora kubva pakureba uye akawana zvinangwa zve 14 mu 55 kuonekwa munguva ye 2016-17 uye ane 17 inobatsira.
Anotamba nemusoro wake uye rutsoka rwake rworuboshwe runokwanisa kuita zvemashiripiti - haamborevi kuti anzwisise zvinhu uye kunyange zvazvo achigona kurova vatambi nekudengenyeka, ane ruzivo rwakakura rwemapfupa ayo anoshandisa kuvanopikisa.
Thomas Lemar Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Career in Summary
Chigadzirwa cheCaen vechidiki system, Lemar akaita chikwata chake chekutanga mumutambo wekutanga we 2013 / 14 muAgasti 2013.
Akaenderera mberi achiita kuti 31 zvioneke zveS SMC, asati atora chikwereti kubva kuEurope - aive pasi peBell Chelsea kupopota uye akabatanidzwa neLiverpool, Lyon neBordeaux zvakare, asi akasarudza kuenda kuMonaco kwe £ 3.4 mamiriyoni mu 2015.
Akamirira France kumativi ose kubva kuU17 kusvika kuU21 uye akaita kuti nyika yake yepamusoro yekutanga mu 2016 inopesana Ivory Coast.
Sekubva kuKaen, mutana wemakore 21 ave achitamba munzvimbo dzakasiyana-siyana dzepakati pemadhora.
Zvichida, Kylian Mbappé, Tiemoué Bakayoko naBernardo Silva vangangodaro vakawana rukudzo rukuru kubva kuvatarisi. Asi basa raMemar muMonaco richikunda Ligue 1 uye kusvika kune Champions League semi-finals haigoni kufungidzirwa.
Akatungamirira boka rake kuti akunde chikwata cheFrance munguva yekupedzisira (2017 / 2017) ndokusvika kumaLatin Championship semi-finals, achigogodza zvaidiwa neManchester City neBorussia Dortmund munzira.
Thomas Lemar Childhood Story Plus Untold Biography Facts:1 Kusakwana, Nyama zhinji
Kunyange zvazvo achitamba pamapapiro, haasi kukomborerwa nekufambisa sezvinoitwa naBenjamin Mendy naMbappé, asi haazvidi. Lemar inofarira kubatanidza uye kutamba imwe-mbiri inopfuura uye kushandisa shanduko uye kutyisidzira kwekutumira kwake kuzarura nzvimbo.
Hapana Monaco murume akatamba mimwe mitambo yepamutambo mumutambo we 2016 / 2017 (2.2) kupfuura Lemar, uye akaitawo mamwe machinjiko (1.4) kupfuura ani zvake wevadzidzi vake. Uye kunze kweavo vaitamba nguva dzose muLigue 1, zvingangodaro zvingasarudzwa Radamel Falcao (2.8), Valere Germain (1.8) uye Mbappe (1.8) aiva nemapurisa akawanda pane chinangwa nemutambo kupfuura Lemar ya1.7.
Yeuka, akanga ari 21 ane makore ane makore akabatsira kugogodza Tottenham kunze kweChampions League nechisungo ichi.
Thomas Lemar Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Baba Vake, Chigumbuso Chekugumbusa kuAsernal Move
Maererano ne GFFN, Baba vaRemar vanoda kuti agare kuMoaco uye kunyange kutora chibvumirano chechibvumirano kuitira kuti 21-ane makore ane nguva yakanakisisa yekukwanisa kuendeswa kuFrance muchengeti weHouse Cup mu2018.
Iro runyereku rwakapararira kuburikidza kunze kwewindo re 2017 rekutsvaga zhizha. Yakaratidza kuti Edwige aida kuti mwanakomana wake 'arambe' Arsenal. Senguva yekunyora, Arsenal inonzi yakadzokera kuMonaco ichiine £ £ 40m yevheji mushure mimwe mimwe mitengo ye £ 31m uye zvino pachena £ 35m vakagodzwa zvakare. Zvisinei, vanonzi vanoda kuenda ku £ 50m.
Mubvunzo ndewokuti; Dai Arsene Wenger aizonyanya kukanda £ 50m - kupfuura Mesut Ozil - kune mutambi waakaronga kuramba ari pabhenji kwenguva yakawanda yemwaka?
Thomas Lemar Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Nei Liverpool Sarudza Salah pane Lemar
Hungu, ivo vanonyatsoda Salah, asi vakacherechedza kuti anoita zvakawanda mubasa rake rakanaka pane kurwiswa kwekamberi chete apo ane nzvimbo, nekuda kwekufamba kwake. Haana hutano hwakavimbika saRimar. Vanofunga kuti marara angabatsira zvikuru mukuputsa mabhazi.
Chikonzero chikuru chavasina kumubatsira ndechokuti ainodhura zvikuru. Vaifunga kuti Monaco haizombotomutengesi pane zvishoma. Vaifanira kuzvidzora nokugumisa Mhembera pamwe zviri nani pane bhora kupfuura iye ari kure naro. Vanotenda kuti vane zvakakwana zveLallana, Coutinho, Gini naFirmino avo vanowakakura pabhora.
Zvavaida ndeimwe mutambi aizoita kuti ibhoti rive nechekudzivirirwa. Salah akanga ari mukomana. Lemar, kune avo vari AM vari nani kupfuura iye LW.
Thomas Lemar Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Zvimwe zvinhu zvokuziva
Muenzaniso waRemar wakagara uri Andres Iniesta, uye inoratidza. Kunyange zvazvo unyanzvi hwake hwekufambisa huri hwakanaka, haasi kufunganya nekutora vadziviriri, asi panzvimbo iyo inonyanya kusimbisa kutamba kwechikwata.
Corentin Tolisso Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts
Nabil Fekir Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts